China Welded EYELET Nọ ANCHOR ROD M20X2700 (SRB-20/2700) Nrụpụta na Factlọ ọrụ | Ike Wangyuang
Welded EYELET Nọgidere ANODOR ROD M20X2700 (SRB-20/2700)
● Hot Itinye kpaliri ígwè dị ka NMX-H-004-SCFI-2008
Hex nut abụọ gbakọtara na mkpanaka.
Rod Mkpịsị arịlịka ejiri efere arịlịka na thimim.
● Na-agbaso nkọwa NMX;
● Omenala size dị n'elu arịrịọ.
Ogwe arịlịka SRB-20/2700 nke sitere na carbon carbon, ezubere iji gbochie waya nwoke ahụ ịgbasa, ịpị, ma ọ bụ ekwe. Echichi ahụ na-eme ka eriri siri ike na-anọchi anya n'elu anya site na mkpịsị aka, na onye na-ejide onwe ya ma ọ bụ ihe osise nwoke, tinye efere arịlịka ahụ n'ime ala site na mkpịsị hex abụọ ahụ.
Pịnye Nọmba SRB-20/2700
Akụrụngwa Carbon nchara
Mkpuchi Hot itinye kpaliri
Standardkpụrụ mkpuchi NMX-H-004-SCFI-2008
Ike erughị ala 73kN
Rụpụta Okpomọkụ ibe ya bụrụ, welded
Ngwa Mee ka ogwe osisi ahụ kwụ ọtọ ma ghara ịda
Ngwa 2 x M20 hex mkpụrụ
Eriri ogologo 100mm
Ibu ibu 7.12kgs
Ntuziaka Maka Mkpịsị Mkpanaka Isi nke 1 –Ihe ngosi nke Ọnụnọ Rod Isi nke 2 – Njirimara Nọrọ Rod
Ibuot 3 - Ajụjụ Ndị A Na-ajụkarị (Ajụjụ)
 Isi nke 1 –Ihe ngosi nke Ọnụnọ Rod
Nọrọ mkpara —- ọ bụ ụdị nchara nchara na polymer plastic mejupụtara anwụrụ (dabere ọkpọkọ). Mpempe akwụkwọ mpụta ya bụ Pee, ABS, ESD plastic layer, etiti ya bụ akwa igwe, akwa dị n'ime ya bụ akwa nchara nchara nke ọkpọkọ na-agbanwe agbanwe. Ntinye nke ngwakọta nke nkwonkwo na ngwa ndị pụrụ iche, enwere ike ịgbakọta n'ime ụdị mgbakọ niile. , usoro mmepụta, okpokoro arụ ọrụ, ụgbọ ala ntụgharị, nchekwa nchekwa na usoro mpụga ndị ọzọ. A na-eji ya na ụlọ ọrụ ụgbọ ala, n'ichepụta ngwá electronic, ụlọ ọrụ nkwukọrịta, injinia ihe ọmụmụ, ụlọ ọrụ ọgwụ, ụlọ ọrụ ndị agha, kemịkal dị iche iche, ngwaike ngwaike na njikọ dịgasị iche iche. ọkpọkọ kwesịrị ekwesị na ejikọta akụkụ nke waya mkpanaka ngwaahịa nwere ike melite na gị pụrụ ichetụ n'echiche only.It bụghị naanị mfe, ọ bụ fun.The waya-mkpanaka ngwaahịa usoro nwere ike e mere na arụnyere na onye ọ bụla, nwere ike e mere ka ọ bụla size, na bụ nnọọ ìhè na mfe aka.
1. Agba agba waya waya dị iche iche. Ndị ahịa nwere ike ịhọrọ agba nke waya waya dịka mkpa nke ha si dị.
2. Waya mkpanaka ngwaahịa ike n'ụzọ dị irè dozie nsogbu nke ego ego.
3. Inwe usoro na-adịgide adịgide ma na-agbanwe agbanwe.
4. A na-ekpuchi eriri igwe n'ime eriri mkpanaka na onye na-egbochi nchara nchara, nke na-agbatịkwu ndụ ọrụ ahụ.
 Isi nke 2 – Njirimara Nọrọ Rod
1. Usoro mgbanwe nke eriri waya dị mfe ma dị mma iji wuo
2. Mgbanwe waya na mkpanaka mgbanwe usoro na-agbanwe agbanwe ụdị na ike mgbanwe.
3. Nchedo gburugburu ebe obibi na nchekwa.
4. Meziwanye gburugburu ọrụ ma rụọ ọrụ nke ọma.
5, nhazi ọkụ, mfe ijikwa, n'usoro usoro ergonomics.
Olee otú sere mkpanaka na sere disk jikọọ ...
A gbajiri eriri USB ahụ. Mgbe a na-etinye chassis ahụ, a ga-ewepu u-screw.Ejiri eriri diski bụ chassis esetịpụrụ iji wedata ihe ọjọọ, tinye ya na eriri USB wee jikọọ eriri diski ahụ.
N'ime igwe eletriki, gbagọọ mkpanaka waya dị mkpụmkpụ, wee wuo ya. Kedu ụdị nke a?
Dị ka ihe atụ, dọpụta efere lie ihe omimi chọrọ nke 2 mita, mkpịsị ahụ na-ehulata na-ehulata, dọpụta efere naanị lie 1 mita ma ọ bụ 1 mita 2, ndị na-ewu ụlọ zọpụta ndị ọrụ aka, n'ime ala ahụghị ebe miri emi, nke a bụ iji belata ogo omume ọrụ
Nke gara aga: Welded EYELET Nọgide ANODOR ROD M20X2500 (SRB-20/2500)
Osote: TURNBUCKLE Nọgide MOD M16 * 1800 (SRT-16/1800)
arịlịka mkpara maka Ihọd waya
arịlịka mkpara M20X2700
Welded eyelet ọnụ arịlịka mkpanaka
QUADRDANT kpuchiri Ydị MGBE MGBE NLL-2
TURNBUCKLE Nọgide MOD M16 * 1800 (SRT-16/1800)
Pigtail nko nko (PERNO OJO)
Njikọ Mechanical AMB25-95
Ngbanwe n'elu ikpo okwu maka osisi ndokwasa nkesa ...